Maxaa looga hadlayaa Shirka u furmaya Madaxda dowladda & Dowlad Goboleedyda | Banaadir Times
HomeUncategorisedMaxaa looga hadlayaa Shirka u furmaya Madaxda dowladda & Dowlad Goboleedyda
Maxaa looga hadlayaa Shirka u furmaya Madaxda dowladda & Dowlad Goboleedyda
Maanta oo Sabti ah ayaa waxaa lagu wadaa in Xarunta teendhada Afisiyooni uu shir aan rasmi aheyn uga furmo Madaxda Dowladda Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Goblka Banaadir, kaas oo looga hadlayo Arrimo dhowr ah.
Shirka oo ay soo qaban qaabisay Beesha Caalamka ayaa waxaa looga hadlayaa sidii looga hehsiin lahaa Ajandaha uu ku furmayo shirweynaha wadatashiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafka qaar kamid ah Madaxda dowladda & dowlad Goboleedyada ka dhex-jira.
Kulan ay xalay yeesheen Guddi Amni oo ka socda shanta maamul goboleed, Madaxwaynaha Soomaaliya iyo Amisom ayaa waxaa lagi go’aamiyay sida lagu sugi karo Amniga Gobta Shirka, waxaana la soo saaray go’aamadaan.
1: In hoolka Teendhada Ammaankeeda ay la wareegto AMISOM.
2: In gudaha Teendhada aan lala geli karin askarta hubaysan ee wadata hubka muuqda.
3: In Madaxda ay la galaan ciidamada VIP protection loo yaqaan lana xadido tiradooda.
4: In dhamaan madaxda oo ay ku jiraan kuwa Dowladda Federaalka ay ciidanka uga tagaan banaanka Teendhada Afisyooni.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida waxaa ay ku cadaadinayaan in heshiis buuxa ay ka gaaraan khilaafka weli kajira Arrimaha doorashooyinka si ay u dhacdo doorasho la isla ogol yahay.
Previous articleKooxo dil geystay oo Gaalkacyo lagu qabtay
Next articleDowladda Soomaaliya oo ka hadashay Diyaarad laga celiyay garoon ku yaal Gobolka Mudug